OnePlus ga - eji ngwa 90 Hz malite mobile ọzọ ma jiri ego belata | Gam akporosis
OnePlus masịrị ọtụtụ ndị ọkọlọtọ ọhụrụ ya, nke bụ OnePlus 7 y 7 Pro ma ha rutere na mbido Mee. Companylọ ọrụ China ahụ maara otu esi emeri onwe ya nke ọma, nke, n'onwe ya, na-ekwu ọtụtụ ihe banyere nrughari nke ikike dị n'etiti ekwentị kpakpando ya tupu ngwaọrụ ọhụrụ ndị a dị elu.
The OnePlus 7 Pro bụ ekwentị kachasị dị oke ọnụ nke nwere njirimara kachasị mma na nkọwapụta teknụzụ na katalọgụ nke ụlọ ọrụ China a ugbu a. Ọ na-eji ojiji nke ihuenyo enwetụbeghị ụdị ndị ọzọ na-emepụta na obere obere achọtara na njedebe ndị ọzọ nke ụdị ndị ọzọ, nke bụ 90 Hz. Ọtụtụ n'ime ogwe ndị a na-ejikarị igwe eji eme ihe taa bụ 60 Hz, n'agbanyeghị ma ha dị ala, ọkara ma ọ bụ dị elu, mana eziokwu a ga-ebelata obere, ebe ọ bụ na-achọ isonye ngwaọrụ ọzọ nwere ngosipụta 90 Hz n'ahịa, ọ ga-abụ site na OnePlus.
Na mkparịta ụka email na CNET, ozi ntanetị nke na-ekwu banyere teknụzụ na okwu ọhụụ, Onye isi ụlọ ọrụ OnePlus kpughere na ọkọlọtọ ya na-esote ga-aga n'ihu iji ngosi 90Hz. Ihe ọzọ na-adọrọ mmasị karị bụ na o kwuru na ekwentị ahụ ga-adị ọnụ ala karịa nke ugbu a OnePlus 7 Pro.
O yiri ka a ga-enwe ụdị ọhụrụ abụọ nke ika a. Adịbeghị anya asịrị na leaks na-egosi na OnePlus 7T y 7T Pro. Ma ọ dịkarịa ala, a ga-ebupụta ụdị mbụ a akpọrọ aha ọhụrụ, nke ga-agbaso àgwà ndị ka mma karịa OnePlus 7 na-etu ọnụ na ịkekọrịta ọtụtụ n'ime ndị ahụrịrị na OnePlus 7 Pro. Anyị na-atụ anya na, na mgbakwunye na panel a na-atụ anya ya, ọ nwere Snapdragon 855 Plus site na Qualcomm, SoC na-egwu egwu nke ekwuputara ma bido n'oge na-adịbeghị anya maka mpaghara ama egwuregwu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » OnePlus malite smartphone nwere ihu igwe 90Hz dị ọnụ ala karịa nke OnePlus 7 Pro